I-Powercolor: i-tweak yokwenza ngokwezifiso i-icon yebhetri yakho ngokwexabiso layo | IPhone iindaba
I-Powercolor: i-tweak yokwenza ngokwezifiso i-icon yebhetri yakho ngokwexabiso layo
UCristina Torres obambe umfanekiso | | Jailbreak
Ngamaxesha amaninzi kwibhlog yethu sithethe malunga nokusebenzisa ithuba lokuqhekeka kwejele ii-tweaks ezikuvumela ukuba wenze ngokobuqu i-iPhone yakho. Kuyinyani ukuba kwiimeko ezininzi, ekuphela kwento abayilungisayo kukubonakala kwelogo, okanye into ebonakalayo encinci yescreen sakho. Nangona kunjalo, ngenxa yokuba ivaliwe njani inkqubo ye-Apple kwaye ngenxa yoxinzelelo lwayo ekuthinteleni abasebenzisi ekuthatheni isigqibo, ezi ntlobo zokukhutshelwa ziphakathi kwezona zisetyenziswa kakhulu. Namhlanje sihamba nenye yolo hlobo. Namhlanje sikwazisa kwiPowercolor.
Kwaye yenza ntoni i-tweak I-Powercolor ukuba uyifaka kwi-terminal yakho yeselula kunye ne-jailbreak? Ngokwenyani sisixhobo esingadibanisiyo, okanye sikucinezele, kakhulu. Ekuphela kwento ekuya kukuvumela ukuba uyenze kukulungisa i-icon yebhetri yefowuni yakho njengoko iphulukana nentlawulo. Oko kukuthi, uya kuba nakho ukubeka ithoni eyahlukileyo kunaleyo izenzekelayo kwaye uthathe isigqibo se-gradient eya kuba nayo ngelixa uyisebenzisa kwaye kukho ukuzimela okuncinci.
La Ukufakwa kwePowercolor tweak Kulula ngokwenyani kwaye phakathi kokukhetha ekunikezelayo kukukwenza kunye nokukhubaza, ukwenza umbala okhethwe ngumsebenzisi kunye neenketho eziphambili apho unokutshintsha umbala okhethiweyo ngokokuthanda kwakho ukuze ibhetri yakho idaywe nayo. . Zonke iipesenti ezi-5 ziya kuthoba ithoni, ukuze ibe ngumzobo ngakumbi ukubuza ibhetri eseleyo oseleyo nayo. Ucinga ntoni ngesindululo?
I-Powercolor yi-tweak enokukhutshelwa simahla kwindawo yokugcina i-BigBoss. Nje ukuba ifakwe kwaye yenziwe ngokwezifiso, kuya kufuneka uphinde uqalise i-terminal ukuze utshintsho luqale ukusebenza. Ilula njengoko kunjalo! Ngaba unesibindi sokuzama kwifayile yakho I-iPhone kunye nombala webhetri yakho?
Umendo opheleleyo kwinqaku: IPhone iindaba » Jailbreak » I-Powercolor: i-tweak yokwenza ngokwezifiso i-icon yebhetri yakho ngokwexabiso layo
Sukuzifaka ezi zinto, ekuphela kwento oza kuyiphumeza kukuthoba isantya. Iifowuni azisenabunewunewu be-iOS 5 okanye i-iOS 6 apho, nokuba une-6/7 tweaks, ukusebenza akuzange kuchaphazele. Nge-iOS 7 kunye ne-iOS 8 oku akusekho njalo. Ingabonakala ngathi i-iPhone yenza kakuhle, de uyithelekise naleyo ingenayo i-jailbreak okanye inezixhobo nje ezimbalwa ezifakiweyo.
Sikuzisa uluhlu oluqinisekileyo lomculo oya ejimini
Inkonzo ye-Apple yezobuchwephesha ithoba umgangatho wayo ngokophando lwakutsha nje